असोज तिन गते जनताले जितेको दिन – Mission
असोज तिन गते जनताले जितेको दिन
आफना जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट सविधान निमार्ण गर्न सात दशक लामो जन सपना नेपालको संविधान संविधानका विश्वव्यापी मुल्य मान्यता र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता भित्र रहेर जन प्रतिनिधिहरुको ९५ प्रतिशत जन सर्मथमा जारि गरिएको नेपालको सविधान २०७२ असोज तिन गते नेपाली इतिहासमा एउटा अविस्मरणीय दिन हो । जनताका प्रतिनिधिहरुले जारी गरेको संविधान आज चार वर्ष वितिसकेको छ । सविधान जारि भई सकेपछि तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मुलकमा स्थाई सरकार निमार्ण भएको छ । सम्वृद्ध नेपाल सुखि नेपाली अहिलेको मुलुक मुख्य कार्यभार तयार भएकोे छ । देश प्रस्ट निति विचार कार्यक्रम र योजना का साथ अगाडि बढि रहेको छ । नेपाली जनताले सधै न्याय र समनाताको चाहना राखे न्याय र सामनताको चहान यो सविधानमा उल्लेख छ । यसले कसै माथि विभेद राखेको छैन । नेपाली जनताले सधै अधिकार र अवसरको चाहना राखे । नेपाली जनताले शान्तिपुर्ण समाज र कानुनको शासन खोजे हिंसा हत्या र हतिहारप्रति कहिल मोह राखेन ।
नेपाली जनताले देशलाई एकतावद्ध बनाएर राष्ट्रिय एकताका साथ विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढन चाहे । नेपालको संविधानमा नेपाली समाजलाई समाजवादि समाजमा रुपान्तरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जनताको बलिदानी सडघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामजिक न्यायसहित लोकतन्त्र सघियता र समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतका महत्वपुर्ण उपलब्धीहरु संस्थागत भएका छन् । संविधान जारीसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थायितत्व दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढने बलियो संवैधानिक आधारशीला निर्माण भएको छ । संविधान सभाबाट जारि भएका संविधानका मुलभुत मान्यताहरुबाट हेर्दा नेपालको संविधान आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक, अग्रगामि र प्रगतिशील अन्तरवस्तुको छ भन्ने निष्कर्ष मा दुई मत हुन सक्दैन । यसले हिमाल पहाड तराई सबै धर्म संस्कृति लिङ्ग, वा क्षेत्रका भए पनि सार्वभौम अधिकार सम्पन्न स्वाभिमानी नेपाली नागरिक भएका छौ । दिगो शान्ती, सुशासन,विकास र समृद्धिको नयाँ ढोका खुलेको छ भने नेपाली समाजलाई समाजवादी व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने नयाँ आधार पैदा भएको छ । यहि सविधानको जगमा शान्ति पुर्ण ढगले समृद्धि नेपालको निमार्ण गर्नु पर्छ । हामीसँगै परिवर्तन भएका देश आर्थिक रुपले कहाँ पुगे हामी कहाँ छौं ? हामी किन सिङ्गगापुर, कोरिया जस्तो धनि हुन सकेनांै । हामीमा के कमजोरी छ ।
आखिरी के भयो भने देश बन्छ । अब हामी पनि गम्भीर बन्नु पदर्छ । केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक विकासको बहस हुन थालेको छ । हामी आर्थिक विकासको जुन बहस आज गर्न खोजेका छौ, युरोपमा यस्तो बहस अढाई सय वर्षअघि भएको थियो । एशियाली देशहरुमा झण्डै ७० देखी विकासको कुरा भईरहेको छ । हामीले २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त ग¥यौ । त्यस यता ६५ वर्ष बिते । सन १९७१ मा पहिलो पटक अल्पविकसित राष्ट्रहरुको सूची तयार हँुदा नेपालसगै चार दर्जन देश त्यसमा थिए । आज हामी त्यही छौ तर धेरै देश आर्थिक रुपले उकालो चढिसके । ५० वर्षमा एशियाकै केही देश जर्जर गरिबिबाट उढे र समृद्धिको शिखर चुम्दैछन् । १९६५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ डलर हुँदा मलेशियाको ३५० डलर, कोरियाको १०५ डलर थियो । आज नेपालाको भन्दा कोरियाको प्रत्तिव्यक्ति आय ४० गुण बढी छ । मलेशियाको प्रतिव्यत्ति आय सातहजार पुग्यो । मलेशिया विश्वको १७औँ औधोगिक मुलुक हो । साधन श्रोत हुँदा हँुदै पनि हामी भने गरिबको रेखामुनि अडकिएका छौ । हामी सगै परिर्वतन भएको भारत विश्वको सातौ औधौगिक देश भएको छ, चिन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र हुदैछ । सिङ्गगापुर एशियाको बाघ बनेर गर्जदै छ । जवकि हामीले प्राप्त राजनीतिक उपल्वधीलाई पटक पटक गुमायौ लडिरहौ । समृद्धि हाम्रो मृगतृष्ण भयो । किन यस्तो भयो। यसको उत्तर हामीले यहि संविधानको जगमा खोजन ढिलो गर्न हुदैन । नेपाल १२५ जातजातिको १२३ भाषाभाषिको देश हो । यहि यो नेपाल नेपाली जनताको संविधान जनताले बनानएको संविधान जनताको लागी बनेको सविधान हो यो । जनताको सम्पुर्ण अधिकारहरु यसमा सुरक्षित छन् । मानवअधिकार प्रसे स्वतन्त्रता मोलिकका अनेक पक्षहरु यी सबै कुराहरु सविधानमा प्रत्याभूत गरिएका छन् ।
असोज तिन गते जारि भएको संविधानमा प्रस्ट भाषमा बुझिेने गरि संविधानको सर्वाच्चता, वहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्प्रर्धाको प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष र कानुनको शासन जस्ता विषयहरु समावेश गरिएको छ । जनताका मौलिक अधिकारहरुलाई प्रस्ट भाषामा लेखिएको छ । संविधानले देशलाई समग्रतामा वुझेको छ । दुनियाले हाम्रो संविधानलाई असाधारण लोकतान्त्रिक संविधान भनेर प्रशशा गरेको छ । एउटै समयमा एउटै टेवुलमा बसेर शान्ति प्रकृया सघियता क्षेत्रीय जातिय मुद्धाहरुको सम्वोधन गर्न संविधान पूर्ण रुपले सफल भएको छ । राज्यका सबै निकायहरुमा महिलाहरुलाई अगाडि ल्याउन पुरुषको दाजोमा बरावरीमा पुराउन ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरि जाति जनजाति आदिवासि मधेसी थारु दलित लगायत पछाडि पारेका पारिएका भनिएका समुदाहरुलाई अगाडि ल्याउनका लागि ४५ प्रतिशतको व्यवस्था सविधानमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रिय संसद र प्रदेशिक संसदमा वा सबै क्षेत्रमा जातिय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा अनिर्वाय प्रतिनिधित्व गराईने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सेनामा समेत विभिन्न सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको पतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्टपति र उप—राष्टपतिमा एक महिला सभामुख र उप—सभाखमामा एक महिला । दुनियाम सविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन हामीले गरेका छौ ।
संविधान तत्कालिन राजनीतिक शक्ति, सन्तुलनको दस्तावेज भएपनि यसले राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आथिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढने बलियो संवैधानिक आधारशिला निर्माण गरेको छ । संविधानले शिक्षा स्वमथ्य आवास खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारिको आधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा आत्मसाथ गरेको छ । मानव अधिकार सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणबाट संविधान उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ । संविधानले मृत्यृदण्डलाई खारेज गरेको छ । बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभुति गरेको छ । छुवाछुत तथा जातिय भेदभावलाई दण्डीय बनाएको छ । संविधानले स्वतन्त्रताको हक समानताको हक प्रेस तथा सुचनाको हक, न्याय सम्वन्धी हक अपराध पिडितको हक यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सम्पतिको हक गोपनियताको हक शोषयण विरुद्धको हक समेत प्रदान गरेको छ । संविधानले सामाजिक न्याय ,सुक्षा र लोककणल्यामा विशेष जोड दिएको छ । विगतको सामाजिक विभेदलाई ध्यानमा राखेर समानुपातिक समवेशीताको सिद्धान्तलाई सविधानले आत्मसाथ गरेको छ । सविधानले पछि पारेका र पारिएका समुदायका लागि विषेश नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसका लागि संवैधानिक आयोगहरुको प्रबन्ध समेत गरेको छ शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित राज्यका सवैधानिक आयोगको व्यवस्था सविधानले गरेको छ ।
महिला आयोग दलित आयोग आदिवासि जनजाती आयोग मधेशी आयोग मुस्लिम आयोग थारु आयोग सममावेशि आयोग भाषा आयोग वितिय तगा प्राकृति स्रोत वाडफाड आयोग आदि । अब हाम्रो राजनीतिक अधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलनको मूख्य अवधि समाप्त भएको छ जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरु सस्थागत गरेका छौ । अब नेपाल नयां चरणमा प्रवेश गरेका छ नेपाल एकताको चरणामा प्रवेश गरेको छ । नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । समृद्धि नेपाल सुखि नेपाली सबैे लाई शुभकामना !
प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज ३, २०७५ 2:09:06 PM |
Posted in प्रदेश नं. ५, विचार
Prevसंविधानको बिरुवा फल्ने बेला आयो ः प्रम ओली
Nextसमृद्धिका लागि नेपालको संविधान